Yekurima Nyika Kutengesa uye Kubhadhara in Malaysia
Sarudza chikamuAccommodations Spare roomsResidential homes Houses Apartments Villas Bungalows
Malaysia ((teerera) mə-lay-zee-ə, -⁠zhə; Malay: [məlejsiə]) inyika iri muSoutheast Asia. Iyo yemubatanidzwa bumbiro remutemo rine nyika gumi nenhatu uye nharaunda nhatu dzemubatanidzwa, dzakaparadzaniswa neSouth China Gungwa kuita matunhu maviri, Peninsular Malaysia uye Borneo's East Malaysia. Peninsular Malaysia inogovera nyika uye yegungwa muganho neThailand uye maritime miganhu neSingapore, Vietnam, uye Indonesia. East Malaysia inogovera miganho yenyika uye yegungwa neBrunei neIndonesia uye muganho wegungwa nePhilippines neVietnam. Kuala Lumpur ndiro guta guru uye guta hombe apo Putrajaya ndiye chigaro chehurumende yemubatanidzwa. Iine huwandu hwevanhu vanopfuura mamirioni makumi matatu, Malaysia ndiyo nyika yechi44 yenyika. Nzvimbo yekumaodzanyemba yekumaodzanyemba kweEurasia iri muTanjung Piai. Munzvimbo dzinopisa, Malaysia ndomumwe wenyika gumi neshanu megadiverse, kumusha kune akati wandei endudzi marudzi. Malaysia ine kwayakatangira muumambo hweMalay iyo, kubva muzana ramakore rechigumi nemasere, yakave inozviisa pasi peHurumende yeBritain, pamwe neBritish Straits Settlements kuchengetedza. Peninsular Malaysia yakabatana seMalawi Union muna 1946. Malaya yakagadzirwazve seCommission yeMalaya muna 1948 uye ikawana rusununguko musi wa31 Nyamavhuvhu 1957. Malaya yakabatana neNorth Borneo, Sarawak, neSingapore musi wa 16 Gunyana 1963 kuti ive Malaysia. Muna 1965, Singapore yakadzingwa mubatanidzwa.Nyika ine marudzi mazhinji nemadzinza akasiyana-siyana. Inenge hafu yevagari vane tsika neMalay, ine zvidiki zvakakura zveChinese, maIndia, uye vagari venharaunda. Ndichiri kuziva chiIslam sechitendero chakamiswa nyika, bumbiro rinopa rusununguko rwechitendero kune vasiri maMuslim. Hurumende inotevedzwa kwazvo paWestminster paramende uye mutemo wezvemitemo wakavakirwa pamutemo unozivikanwa. Musoro wedunhu ndimambo akasarudzwa, anozivikanwa saYang di-Pertuan Agong, anosarudzwa kubva kuvabati venhaka vevapfumbamwe veMalawi nyika makore mashanu ega ega. Musoro wehurumende ndiye Prime Minister. Mushure mekusununguka, iyo Malaysian GDP yakakura paavhareji ye6,5% pagore kweanoda kusvika makore makumi mashanu. Hupfumi hwekare hunoshamiswa nezvisikwa zvaro asi huri kuwedzera muzvikamu zvesainzi, kushanya, kutengeserana nekushanya kwekurapa. Malaysia ine ichangoburwa emusika misika economisheni, inowanikwa chechitatu-hukuru muSoutheast Asia uye makumi matatu nembiri mukurusa pasi. Iyo inhengo yekutanga ye ASEAN, EAS, OIC uye inhengo yeECEC, iyo Commonwealth uye Isiri-Yakagadziriswa Movement.
Makamu esePokugaraDzimba dzekugara